#ဒီကြေညာချက်အရ #WC တွေ #အကုန်လုံး တရား မ၀င်တော့ဘူး။ (ဒီတော့ WC မဲပေးခွင့် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။) | democracy for burma
#ဒီကြေညာချက်အရ #WC တွေ #အကုန်လုံး တရား မ၀င်တော့ဘူး။ (ဒီတော့ WC မဲပေးခွင့် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။)
tags: ဒီကြေညာချက်အ, Burma, Myanmar, president-office, WHITE CARD
လူဆယ်ယောက်မှာ ဆယ်ယောက်လုံးက ဒီ သမ္မတကြေငြာချက်ဆိုတာကြီးကို အယုံအကြည်မရှိဘူး။ Cmmတွေ ဖတ်ကြည့်ပေတော့ . . . . .
• WC မရှိတဲ့ကောင်တွေတောင် ဘင်္ဂလားပြန်မပို့နိုင်တာ။ အခုလဲ WC တွေကို သက်တမ်းကုန်ခိုင်းပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ၊ မှတ်ပုံတင်ပေးမှာပေါ့။ တရားမဝင် ဘင်္ဂလီကနေ တရားဝင်ဘင်္ဂလီဖြစ်သွားတာပေါ့။
By Phyoe Myat
• အပြောင်အလဲမှာ ပန်းရောင်ကဒ် ပိုထုတ်ပေးလိုက်လို့ကတော့ ဂွင်ကြီးကို လုပ်စားပေတော့။
By Aung Wai Lynn
• တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းသာလုပ်နေကြတယ်၊ ဟိုကအော်, ဒီကပြောမှ လုပ်တတ်နေကြရင် ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ် ပြန်ကြည့်ပြီး မင်းလုပ်နေတာ ရှက်ကြပါအုံးလားကွာ။
By Khun Myo
• White card မဲပေးခွင်ပြုထားတာနဲ့ ဘာမှ မပတ်သတ်သေ.ဘူး။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်းတာ White Card လုံးဝမပေးဖို့ဘဲ။ ဟိုအကွက်ရွေ့၊ ဒီအကွက်ရွေ့တော့ မလုပ်နဲ့း သိပ်လည်လှပြီထင်နေလား မသိဘူး။ တိုင်းရင်သားတွေကျတော့ ဂရုမစိုက်။ သူတို့ အာဏာရပြီ နိုင်ငံတကာဖိအားဘဲ ဂရုစိုက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလား!
By Arakan Khine Min
• အပြုသဘော နည်းနည်းပြောကြည့်ပါမယ်။ wc ကို မတ် ၃၁ သက်တမ်းကုန်တယ် ပြောပါတယ်။ မေ ၃၁ နောက်ဆုံးအပ်ရမယ် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒခံယူပွဲက မေလလုပ်မယ် ပြောပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ တခုခု လွဲနေသလိုပါဘဲ???
By ရဲရင့် ထိုက်စံ
• ဒီလိုဆိုရင်လ်ည်း တရားဝင် ကြေညာပေးပါလား။ White card သည် 2015 မှာ လုံးဝ မဲပေးခွင့်မရှိတော့ပြီလို့။ အဲလိုဆိုရင် အားလုံးဝမ်းသာနှိုင်တာပေါ့။ ကျေးဇူးပါ။ ရှင်းပြတဲ့အတွက်။ စေတနာရှိရင် တခေါက်လောက် ကျေးဇူးပြုပြီးထုတ်ပြန်ပေးပါ။ ပြတ်ပြတ်သားသား White card လုံးဝ မဲပေးခွင့် မရှိပါလို့။ Thank you
• ကျွန်မကတော့ နားလှည့် ပါးရိုက်လားလို့ ဦးလေးရယ်? ဥပဒေနဲ့ညီရင် ပန်းရောင်ပေးမယ်၊ မညီတဲ့သူတွေကို ဘာလုပ်မှာလဲ? ဘာကဒ်မှ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ သူ့နိုင်ငံ ပြန်ပို့မှာလား? ဟား ဟား ဟား နောက်ဆုံးတော့ အကုန်လုံး ပန်းရောင်ပေးပြီး မဲထည့်ခိုင်းမယ်ပေါ့လေ . . . . . .
• ၀ှိုက်ကဒ်တွေ ပန်းရောင်ကဒ် မဖြစ်ကြပါစေနဲ့!!! တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေက လွဲလို့!!!
By Myitzu AyeWC သမားတွေက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ပန်းရောင်ကဒ် ထုတ်ပေးမှာပါ။ စီစစ်မယ်ဆိုတာ ဟန်ပြသက်သက် လုပ်ပေးထားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဦးဌေးဦးပြောတာလေးကို ပြန်လည်နားထောင်ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပန်းရောင်ကဒ်တွေ ဖောချင်း သောချင်း ထုတ်ပေးပြီး အနိုင်ယူခဲ့တာတွေ၊ လက်ရှိ ဘင်္ဂလီအမတ် ၃ ယောက်လွှတ်တော်ထဲ ခပ်တည်တည်ဝင်ထိုင်နေတာက သက်သေပါပဲခင်ဗျာ။
• အစကတည်းက ဒါကို အရင်ကြေညာရမှာလေ။ အလကားနေရင်း သိက္ခာကျတယ်။ ခုတော့ ပွဲဆူအောင် လုပ်သလိုလို, အာရုံလွဲသလိုလို, ဆန္ဒပြမှာ ကြောက်သလိုလိုပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။
မရထိုက်တဲ့သူတွေ ရထားတာဖြစ်လို့ ပယ်ဖျက်ရမှာသာ ဖြစ်တယ်။
By Sein Nyunt
• လဝက ရဲ့ လက်စွမ်းပြချက်လေး။ ရိုဟင်ဂျာ မရှိပါဘူး ပြောလျက် နဲ့ လဝက ရဲ့ လုပ်ရပ်၊ ဦးခင်ရီ ဘာလုပ်မတုံး?
By Myat Minarkarwaihin
■ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံရေးအစီအစဉ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ■
မနေ့က (၁၀,၀၂,၂၀၁၅) သိန်းစိန် က လက်မှတ်ထိုးပြီး အတည်ပြုသတဲ့။ ဒီနေ့ (၁၁,၀၂,၂၀၁၅) ပယ်ဖျတ်ဆိုပြီး လာပြန်တယ်။ အဟဲ ဟဲ
• ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများ မဲပေးခွင့်ပြုသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေကို သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ညပိုင်း မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းကြေညာချက်အရ သိရသည်။ သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးပြီးဖြစ်သော အဆိုပါ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်(၂) အဖြစ် ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Hmuu Zaw ဒီကြေညာချက်အရ WC တွေ အကုန်လုံး တရား မ၀င်တော့ဘူး။ (ဒီတော့ WC မဲပေးခွင့် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။) WC တွေ ပြန်လည်အပ်နှံချိန် မတ်လ ၃၁ မှ မေလ ၃၁ အထိ အချိန်ပေးထားပါတယ်။ WC ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံးဟာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနဲ့ အညီ စိစစ်မှု ပြန်ခံရပါမယ်။ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တဲ့သူမှသာ ပန်းရောက်ကဒ် ရမယ်၊ မညီတဲ့သူ မရဘူး။ နိုင်ငံသားစိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးပြတ်ပြီး ဖြစ်မယ်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ကစပြီး White Card ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ တရားမ၀င်တော့ဘူး။ မလဲဘူး ဆိုတဲ့သူတွေ မေ ၃၁ ကျော်ရင် ဘာကဒ်မှ မရှိတော့ဘူး။ လဲမယ် ဆိုရင် ဒီကာလအတွင်း လဲရမယ်။ (စိစစ်ပြီးမှ ဥပဒေနဲ့ ညီမှ ကဒ်ထုတ်ပေးမယ်။) ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ■ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် (White Card) သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံရေးအစီအစဉ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ■ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၁၉ /၂၀၁၅ ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၈ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်) “ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် သက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံရေးအစီအစဉ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း” ၁။ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးနှင့် လက်တွဲဖော်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များသည် နိုင်ငံ၏ ရေရှည်အကျိုးကို ရည်ရွယ်၍ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လတ်တလောပြဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေ၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေများ တို့ကို ပြဌာန်း ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ၂။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (၁) ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၃) ပါ ပြဌာန်းချက်တို့နှင့်အညီ နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသူအချို့သို့ လိုအပ်ချက်အရ ကိုင်ဆောင်ရန် ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ်များအား ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ နိုင်ငံသားစိစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား မိုးပွင့်အထူးစီမံချက်ဖြင့် အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်၍ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့ရက်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ သတ်မှတ်ပါသည်။ ၃။ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေများ၏ နည်းဥပဒေ ၁၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၄) ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံခြင်း၊ စိစစ်မှုခံယူခြင်း တို့ကို သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာ၍ နည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်ကြရမည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် လက်မှတ်များ အပ်နှံခြင်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ၁၉၅၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေများ ၏ နည်းဥပဒေ ၃၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၁) နှင့် နည်းဥပဒေခွဲ (၃)၊ နည်းဥပဒေ ၂၉ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၂) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များအရ နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရေး၊ ညီညွှတ်မျှတမှု ရှိစေရေးတို့အတွက် မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ မိုးပွင့်အထူးစီမံချက်တွင် ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးဖြစ်သော တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စု ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ပါသည်။ ၅။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေးအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)ပါ ပြဌန်းချက်အရ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အားလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှူးအား လည်းကောင်း တာဝန်ပေး အပ်ပါသည်။ ၆။ ထို့အပြင် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းက ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ် အကြံပြုရေးကော်မရှင်ကို ပညာရှင်များ၊ ပါဝင်ထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်ပါသည်။ (ပုံ) သိန်းစိန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
← #BURMA #MYANMAR #Military #training #courses #offered in #universities
#ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် #အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကတိပြုချက် #National #Reconciliation →